नया बर्षकै दिन पा”पी’ले मेरी छोरी मा”रि’दि’यो ! त्यो दिन माइती घरमा राखेको भए यस्तो हुदैनथ्यो भन्दै रूँ’दै आए……….(भिडियो) - सिधा मिडिया
२ बैशाख २०७९, शुक्रबार २१:४९ मा प्रकाशित
439 जनाले पढ़िसके
रुपन्देहीको तिलोत्तमामा एक महिलाको रह”स्यमय मृ”त्यु भएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिका–२ ड्राइभर टोल बस्ने २९ वर्षीया अमृता क्षेत्री टण्डनको रह”स्यमय मृ”त्यु भएको हो । उनको माइती पक्षले भने अनिताको ह’ ‘त्या भएको आ”रोप लगाएको छ । वि ष से’व’न गरी देहत्याग गरेको सूचना प्र”हरीले राति पाएको थियो । सोही सूचनाका आधारमा इलाका प्र”हरी कार्यालय बुटवलबाट टोली ख’टिएको थियो । ‘किटनाशक वि’ष से’व’न गरेको सूचना पाएपछि प्र”हरी घ”टनास्थल गएको थियो।
यस विषयमा अनुसन्धान जारी छ, माइती पक्षले ह’ ‘त्या भएको भनिरहनुभएको छ,’ प्र”हरी नायब उपरीक्षक पौडेलले भने । बुधबार राति सवा १० बजे घरमै अनिताको श”व फे”ला परेको थियो । अनिताको ह’ ‘त्या भएको भन्दै माइती पक्षले प्रदर्शन गरेपछि प्र”हरीले अनुसन्धानका लागि भन्दै श्रीमान् प्रेम टण्डनलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्र”हरी कार्यालयका प्र”हरी नायव उपरीक्षक नवरत्न पौडेलले अनुसन्धानपछि मात्रै घ”टनाको वास्तविक विवरण पत्ता लाग्ने बताए ।
माइती पक्षले कार”बाहीको माग गर्दै प्रेमको घर घेराउ गरेपछि प्र”हरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । पो”स्टमार्टम रिपोर्ट आइसकेपछि मात्रै वि’ष से’व’नबाट मृत्यु भएको हो वा के भएको हो भन्नेबारेमा थाहा हुने उनको भनाई छ । क’र्त’व्य ज्या’नमा जाहेरी दिए पनि निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउन प्रहरी प्रयासरत रहेको डिएसपी पौडेलले बताए । राति साढे ८ बजेसम्म छोरी माइतमै थिई,ज्वाईले तीन पटकसम्म फोन गरेर घर आउने भए आऊ नभए छोरालाई जे पनि हुनसक्छ।
भनेपछि घर गएकी हो’ सावित्राले भनिन्, ‘घर गएपछि साढे ९ बजे मलाई बचाऊ भनेर दाइलाई म्यासेज गरेकी रहिछ, दश नबज्दै मृ”त्यु भएको खबर आयो । छोरीलाई घरमा सासु, ससुरा, श्रीमान्ले धेरै पहिलादेखि नै गा’ली’ग’लौ’ज र या’त’ना दिंदै आएको सावित्राले बताइन् । अमृताको सात वर्षअघि प्रेम विवाह भएको थियो । पटकपटक या’त’ना पाएपछि गत भदौमा वडा कार्यालयमा निवेदन दिएपछि आइन्दा मिलेर बस्ने सहमति भएको थियो । मृ”तकका ५ वर्षीय छोरा छन् ।
अमृता को ह’ ‘त्या भएको भन्दै बिहीबार बिहानैदेखि प्रदर्शन भइरहेको छ । प्र”हरी नायब उपरीक्षक पौडेलका अनुसार माइती पक्षले जाहेरी पनि क’र्त’व्य ज्या’नमा दिएका छन् । सो जाहेरी पनि दर्ता भइसकेको पौडेलले जानकारी दिए । अमृता र प्रेम टण्डनको पाँच वर्ष अघि विवाह भएको थियो । वि’ष से’व’न गरेको भए माइती, प्रहरी र छरछिमेकलाई जानकारी गराइन्थ्यो तर त्यसो नभई योजनावद्धरुपमा ह’ ‘त्या गरेर वि’ ‘ष से’व’नको बहाना बनाएर अस्पताल पुर्‍याइएको छिमेकी कमला पोखरेलले बताइन् ।
बुधबार राति ९:३० बजे आफूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत दाइ मलाई बचाउनुहोस्, मलाई यहाँबाट निकाल्न सहयोग गर्नुहोस् भन्दै एसएमएस गरेको समेत खत्रीले बताएका छन् । अमृता को शव पोस्टमार्टम गर्न बुटवलस्थित प्रादेशिक अस्पताल राखिएको छ । तर पो”स्टमार्टम नभइसकेको जिल्ला प्र”हरी कार्यालयले जनाएको छ । घरपरिवारले योजना बनाएर ह’ ‘त्या गरेको अमृताका दाजु पुष्प खत्रीले आरोप लगाएका छन् । खत्रीका अनुसार पहिलादेखि नै घरायसी कामको विषयलाई लिएर घर पक्षले अनितालाई ध’म्की दिने, झ’ग’डा गर्ने र हा’त’पा’त गर्ने गरेका थिए । पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।